हिमानी शाहले यसरी मनाईन् जन्मदिन! किन भयो पारसलाई निर्मल निवासमा नो इ,न्ट्री? (तस्वीरहरु हेर्नुहोस्) - सप्तरंगी संसार::– रंगिबिहिनहरुको रंग
हिमानी शाहले यसरी मनाईन् जन्मदिन! किन भयो पारसलाई निर्मल निवासमा नो इ,न्ट्री? (तस्वीरहरु हेर्नुहोस्)
३ बच्चाकी आमा भए पनि सदावहार सुन्दरी हिमानी शाहलाई जन्मदिनको अवसरमा उनका आफन्त, शुभचिन्तक र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुले शुभकामना दिइरहेका छन् ।
भारतको राजस्थानको सिकरका पूर्व सूर्यबंशी राजकूलका राजा बिक्रम सिंह र रानी बिपुला सिंहकी छोरी हुन् हिमानीको विबाह पारस शाहसँग २५ जनवरी २००० मा भएको थियो ।
उनीहरुका एक छोरा हृदयेन्द्र शाह र दुई छोरी पूर्णिका शाह, कृतिका रहेका छन् । पछिल्ला दिनमा ‘हिमानी ट्रस्ट’ नामक सामाजिक संस्थाबाट हिमानीले समाजसेवामा ब्यस्त छिन् भने छोराछोरीहरु थाइल्याण्डमा बसेर पढाई गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय हिमानी र उनका छोरीहरुले बनाएको टिकटक पनि भाइरल भएको थियो । जन्मदिन मनाउन काठमाण्डौंमै भएका पारस किन पुगेनन् भनेर चर्चाको बिषय बनेको छ । सबै तस्वीर हिमानीको ट्वीटरबाट ।